Mabasa Evaapostora 16:1-40
Pauro anosarudza Timoti (1-5)
Pauro anoona murume wekuMakedhoniya muchiratidzo (6-10)
Ridhiya anotendeuka muFiripi (11-15)
Pauro naSirasi vanoiswa mujeri (16-24)
Murindi wejeri neimba yake yese vanobhabhatidzwa (25-34)
Pauro anoda kukumbirwa ruregerero nevatongi (35-40)
16 Saka akasvika kuDhebhe uyewo kuRistra.+ Ikoko kwaiva nemumwe mudzidzi ainzi Timoti,+ amai vake vaiva vechiJudha uye vari mutendi, asi baba vake vari muGiriki, 2 uye aipupurirwa zvakanaka kwazvo nehama dzemuRistra neIkoniyumu. 3 Pauro akataura kuti aiva nechido chekufamba naTimoti, uye akamutora akamuchecheudza achiitira vaJudha vaiva munzvimbo idzodzo,+ nekuti vese vaiziva kuti baba vake vaiva muGiriki. 4 Pavaifamba mumaguta, vaivaudza mirayiro yakanga yasarudzwa nevaapostora nevakuru vaiva muJerusarema kuti vaichengete.+ 5 Saka ungano dzakaramba dzichisimbiswa pakutenda uye dzichiwedzera zuva nezuva. 6 Uyewo vakapfuura nemuFrijiya nemuGaratiya,+ nekuti vakarambidzwa nemweya mutsvene kuparidza shoko munharaunda yeEzhiya. 7 Zvakare, pavakadzika kuMisiya vakaedza kupinda muBhitiniya,+ asi mweya waJesu hauna kuvabvumira. 8 Saka vakapfuura Misiya* vakadzika kuTroasi. 9 Uye Pauro akaona chiratidzo usiku chemumwe murume wekuMakedhoniya akanga akamira achimukumbira achiti: “Yambukirai kuno kuMakedhoniya mutibatsirewo.” 10 Paakangoona chiratidzo ichi, takapinda munzira takananga kuMakedhoniya, taona kuti Mwari akanga atishevedza kuti tizivise mashoko akanaka kwavari. 11 Saka takapinda mugungwa tichibva kuTroasi, tikananga kuSamotrasi, mangwana acho tikaenda kuNeaporisi; 12 uye takabva ikoko tikaenda kuFiripi,+ guta raitorwa sereumambo hweRoma, riri guta rinokosha muruwa rweMakedhoniya. Takagara muguta iri kwemazuva. 13 Musi weSabata takabuda kunze kwegedhi pedyo nerwizi, pataifunga kuti paiva nenzvimbo yekunyengeterera, uye takagara pasi, ndokutanga kutaura nevakadzi vakanga vaungana ipapo. 14 Uye mumwe mukadzi ainzi Ridhiya, mutengesi wemachira epepuru, aibva kuguta reTiyatira+ ari munamati waMwari, akanga achiteerera, uye Jehovha* akanyatsovhura mwoyo wake kuti ateerere zvaitaurwa naPauro. 15 Iye neveimba yake pavakanga vabhabhatidzwa,+ akatikumbira kuti: “Kana muchindiona sendakatendeka kuna Jehovha,* uyai mugare pamba pangu.” Uye akaramba achitinyengetedza, tikaenda. 16 Zvakaitika kuti pataifamba tichienda kunzvimbo yekunyengeterera, takasangana nemumwe mushandi wechisikana aiva nemweya wekuuka.+ Aiwanisa vanatenzi vake pfuma yakawanda nekufembera. 17 Musikana uyu akaramba achitevera Pauro nesu achishevedzera mashoko ekuti: “Varume ava varanda vaMwari Wekumusorosoro+ uye vari kukuzivisai nzira yeruponeso.” 18 Akaramba achidaro kwemazuva akawanda. Pauro akazopedzisira aneta nazvo, akatendeuka, ndokuti kumweya wacho: “Ndinokurayira nezita raJesu Kristu kuti ubude maari.” Wakabva wangobuda maari ipapo.+ 19 Vanatenzi vake pavakaona kuti vakanga vasisina kwekuwana pfuma,+ vakabata Pauro naSirasi, vakavazvuzvurudzira kumusika kuvatongi.+ 20 Vakavaendesa kuvatongi vehurumende, vakati: “Varume ava vaJudha, uye vari kukanganisa guta redu zvisingaiti,+ 21 vachizivisa zvinhu zvatisingabvumirwi nemutemo kuita kana kutevedzera, sezvo tiri vaRoma.” 22 Vanhu vese vakabva vavapandukira, uye vatongi vehurumende vakavabvisa nguo vachiita zvekudzibvarura, vakaita kuti varohwe neshamhu.+ 23 Pavakanga vavarova shamhu dzakawanda, vakavakanda mujeri, vakaita kuti murindi wejeri anyatsovachengetedza.+ 24 Nemhaka yekuti akanga audzwa izvi, akavakanda mujeri remukatikati ndokuvasunga tsoka dzavo zvakasimba muzvisungo zvematanda.* 25 Asi nechepakati peusiku, Pauro naSirasi vainyengetera vachiimba vachirumbidza Mwari,+ uye vamwe vasungwa vaivanzwa. 26 Pakarepo kudengenyeka kwenyika kukuru kwakaitika zvekuti faundesheni yejeri yakazununguswa. Zvakare, masuo ese akabva angovhurika, uye zvisungo zvevanhu vese zvakasununguka.+ 27 Murindi wejeri paakamuka ndokuona masuo ejeri akavhurika, akavhomora bakatwa rake uye akanga ava kuda kuzviuraya, achifunga kuti vasungwa vakanga vatiza.+ 28 Asi Pauro akashevedzera nenzwi guru achiti: “Usazvikuvadza, tiri muno tese!” 29 Saka akakumbira zvekuvhenekesa, akamhanyira imomo uye akawira pamberi paPauro naSirasi achidedera. 30 Akavabudisa kunze, akati: “Madzishe, ndingaitei kuti ndiponeswe?” 31 Ivo vakati: “Tenda munaShe Jesu, uye uchaponeswa, iwe neimba yako.”+ 32 Vakabva vamuparidzira shoko raJehovha* nevamwe vese vaiva mumba make. 33 Uye akaenda navo panguva iyoyo yeusiku, akavageza maronda avo. Iye neimba yake vakabva vangobhabhatidzwa.+ 34 Akavapinza mumba make, ndokuvaisira zvekudya patafura, uye akafara chaizvo neimba yake yese sezvo akanga atenda muna Mwari. 35 Pakwakaedza, vatongi vehurumende vakatuma mapurisa kunoti: “Sunungura varume vaya.” 36 Murindi wejeri akasvitsa mashoko avo kuna Pauro achiti: “Vatongi vehurumende vatuma vanhu kuti imi vaviri musunungurwe. Saka chibudai henyu iye zvino muende nerugare.” 37 Asi Pauro akati kwavari: “Vakatirova pamberi pevanhu vese tisina kuwanirwa mhosva,* isu tiri vaRoma,+ vakatikanda mujeri. Iye zvino vava kutibudisa kunze pachivande! Aiwa, hazviiti! Ivo ngavauye vatibudise.” 38 Mapurisa akanoudza vatongi vehurumende mashoko aya. Vatongi vacho vakatya pavakanzwa kuti varume vacho vaiva vaRoma.+ 39 Saka vakauya vakavanyengetedza, ndokuvabudisa, vakavakumbira kubva muguta iroro. 40 Asi vakabuda mujeri, vakaenda kumba kwaRidhiya; uye pavakaona hama, vakadzikurudzira,+ ndokuenda.
^ Kana kuti “vakapfuura nemuMisiya.”
^ Kana kuti “tisina kutongwa.”